Fampiasam-Bola, Hetra Deductions - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Fampiasam-Bola, Hetra Deductions
Tamin'ny volana janoary amin'ny taona, ny Lahatsoratra vaovao, mitondra ny lohateny hoe 'ny Fampiasam-bola ny Hetra Deduction,' niseho ao amin'ny Toko faha- ao amin'ny Hetra Fehezan-dalànaNy teny hoe lahatsoratra ity dia voafetra: izany no ilana amin'ny taona, tao amin'ny janoary. Ny fidiram-bola ny hetra deduction ho an'ny fampiasam-bola dia azo atao noho ny vola lany tamin'ny fividianana, fanorenana, na ny toetr'andro ny fananany raikitra. Izay ihany ny hetra (na mialoha ny fandoavam-bola) karama isam-paritra ny teti-bola dia afaka ny deduction. Ny fampiasam-bola deduction dia tsy ampiharina ny fikajiana ny fidiram-bola ny hetra ho an'ny mivaingana vondrona mpandoa hetra. Iza no manana zo handray ny fampiasam-bola deduction? Tsara ny fidiram-bola ny hetra fampiasam-bola deduction dia napetraky ny lalàna vatantsika ny foto-kevitra ao amin'ny Federasiona rosiana. Izany hoe, orinasa iray na ny misaraka subdivision afaka mampiasa ny deduction, raha izany no misy ao amin'ny faritra izay ny zo toy ny deduction dia naorina. Isaky ny foto-kevitry ny Federasiona rosiana manana zo hametra io zo io deduction ho an'ny sasany sokajy ny mpandoa hetra.
Aza hadino: ny fampiharana ny fampiasam-bola deduction dia atao an-tsitrapo.
Izany dia midika fa ny orinasa izay manana ny zo ny deduction amin'ny lalàna tsy manana adidy mampihatra izany zo izany. Mpandray anjara isam-paritra tetikasa fampiasam-bola, maimaim-poana ara-toekarena amin'ny faritra, faritra ara-toekarena manokana ireo mponina sy ireo mpandray anjara Magadan Faritra manokana ara-toekarena amin'ny faritra mety tsy mampihatra ny deduction. Ankoatra izany, ny fikambanana mirotsaka amin'ny asa mifandray amin'ny fitrandrahana ny hydrocarbons any new offshore tambinteny mipetraka ihany koa ny tsy mampiasa ny deduction. Ny fandraràna mihatra ihany koa ny mponina ao amin'ny faritanin'i mandroso ara-tsosialy sy ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny mponina ny maimaim-Poana amin'ny Seranan-tsambon'i Vladivostok, ny mpandray anjara ao amin'ny Skolkovo Tetikasa sy ny orinasa vahiny izay hetra mponina ao amin'ny Federasiona rosiana (fanatanterahana asa ara-barotra ao Rosia ny alalan ny solontena maharitra ny birao). Ny fampiasam-bola deduction azo ampiharina ihany no ho fananany raikitra antenaina mba hanompo amin'ny ka hatramin'ny taona. Isan-panorenana fikambanana ao amin'ny Federasiona rosiana manana zo hanaiky sasany sokajy ny foto-drafitrasa ho an'ireo izay fampiasam-bola deduction azo ampiharina, na tsy ampiharina. Ny fampiasam-bola ny hetra deduction ny amin'izao fotoana izao ny fe-potoana tsy mihoatra ny ny ny vola lany noho ny vanim-potoana, anisan'izany ny voalohany vidy raikitra pananana. Raha raikitra pananana efa nohavaozina, avy eo ny fampiasam-bola deduction dia tsy mihoatra ny ny ny vola lany ny fandidiana toy izany. Ny vola ny fampiasam-bola deduction ny amin'izao fotoana izao ny fe-potoana tokony ho ao anatin'ny fahasamihafana roa soatoavina.
Ny voalohany dia ampahany amin'ny tombom-barotra hetra aloa isam-paritra ny teti-bola sy ny kajy amin'ny isan-jato.
Ny faharoa dia ny lanjan'izy ireo dia ny ampahany amin'ny tombom-barotra hetra aloa isam-paritra ny teti-bola sy ny kajy eo amin'ny fototry ny ny tahan'ny (na hafa sarobidy nekena ao amin'ny faritra). Na ny voalohany sy ny faharoa dia be dia tapa-kevitra raha tsy ny soso-kevitr'izy ny fampiasam-bola deduction. Ny fampiasam-bola deduction tokony ho ampiharina eo amin'ny vanim-potoana izay raikitra pananana dia nataony ho asa, na raha tany am-boalohany ny zava-dehibe dia niova noho ny fanavaozana. Raha ny fetra ho an'ny fe-potoana efa nihoatra, ny sisa tavela tamin ny deduction, amin'ny ankapobeny, dia mety ho nafindra ho manaraka ny vanim-potoana. Raikitra pananana izay ny fampiasam-bola deduction dia ampiharina dia tsy manaiky ny fihenan-danjan'ny. Fa ity fandraràna mitohy ihany fa cost, izay fampiasam-bola deduction no ampiharina. Raikitra pananana izay ny fampiasam-bola deduction efa ampiharina dia tsy voarara tsy ho amidy. Na izany aza, amin'io tranga io, ny fikambanana dia tsy maintsy hamaly ny soa hetra ao amin'ny fanontaniana ny faritra sy mandoa sazy saran'ny ny vanim-potoana rehetra manomboka amin'ny fampiharana ny deduction. Ny sisa ny vola tafiditra ao amin'ny voalohany vidiny raikitra pananana dia afaka ny ho ampiasaina ho toy ny deduction ny fidiram-bola federaly hetra. Ny zo ity fampihenana dia voafetra ho an ireo izay nampiasa ny zo isam-paritra ny fampiasam-bola deduction. Ny habetsahan'ny ny hetra hofany, niforona taorian'ny toy ny fampihenana ny mety ho aotra.
Iraisam-Pirenena Ara-Barotra Mpanelanelana
El Establecimiento De Una Presencia Legal En Rusia